စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, July 08, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
လူ့ဘဝကြီးမှာ ဆုံတွေ့ကြပြီးရင် ခွဲခွာကြရတာ ဓမ္မတာပါပဲကွယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကုန်သေးတာမို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ် ရွှေညာသားလေးရယ်။ မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ မနက်ဖြန်တွေမှာ ပို့စ်အသစ်လေးတွေ ဆက်တင်နိုင်ပါစေ။ စိတ်ဓာတ်အစဉ် ကြည်လင်အေးမြ ချမ်းသာသုခနဲ့ ထာဝရ ပြီးပြည့်စုံပါစေလို့ တောင်းဆုချွေခဲ့တယ်နော်။
လွမ်းလိုက်တာ ရွေညာသားလေး ထန်းညက်ခဲလေးရယ်။ကြုံ ကြုံသလိုတော့ ဝင်ခဲ့ပေါ့။ သတိရနေမှာပါ. ပြန်လည်တွေ့ဆုံဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီကလည်းငိုတတ်တယ် တိုင်မှီပြီးငိုမှာလား. အဟိ. နပ်တွေ သုတ်လိုက်ဦး.
ပို့ အသစ်တွေမဖတ်ရရင်လည်း အဟောင်းလေးတွေလာဖတ်ပါမယ်။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေလို့ စိတ်အေးချမ်းသာရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အမေနဲ့ ပြန်နေရမှာဆိုတော့ တကယ်တော့ပျော်စရာကြီးပါ။
အညာသားလေး အညာပြန်တာ ပျော်စရာပါ အခု အညာမှာလည်း နက်ကြီး သုံးနေကြပါပြီဗျာ
မန္တလေး ရောက်ရင်လည်း ဝင်ခဲ့ပါ
ဝမ်းနည်းမှု ကြားကပဲ အိမ်ပြန်နိုင်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် အကိုရေ..အားရင်အားသလို အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ဘလော့ပေါ်လည်း တက်ခဲ့ပါအုံးလို့....လှပသော အိမ်ပြန်ချိန်လေး ဖြစ်ပါစေလို့
ကိုညာသားရေ.... ပြန်လာရင် ပြန်ရေးပါနော်။ မျှော်နေမယ်။ အခွင့်အခါ သင့်တိုင်း ဘလော့တင်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။ အမြဲလည်ဖြစ်နေတဲ့ အကို့ရဲ့ နေရာကို မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ထန်းလျက်ခဲလေးရေ နောက် ဘယ်နေရာမှာပဲပဲ ဘယ်အကွေ့မှာပဲဆုံဆုံ အပြုံးလေးတွေနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြမယ်လေ။
ကျန်ရှိနေသေးသော ခြေလှမ်းများကို ပန်းခင်းလမ်းများပမာ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...
ရွှေညာသားလေးရေ။ ပို့ အသစ်လေးတွေကိုအမြဲမျှော်နေမှာပါ။
ဆာယိုနာယာ...ဂျပန်လို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့...မပူပါနဲ့ ဘလော့ပိုးဆိုတာ ဒီလောက်သတ်ရခက်သဟာ ရွှေညာသားတစ်ယောက် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဘလော့ရွာကို ပြန်ရောက်လာဦးမယ်ဆိုတာ သေချာနေမင့်မဟုတ်လား...
ဒီအချိန်ရောက်လာဦးမယ်ဆိုတာ အစကထည်းက မှန်းမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အညာအကြောင်းတွေ စုံလင်နေအောင် တင်ပေးသွားတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျနော်ပြောသားဗျာ။ .com လေး ပြောင်း သွားလိုက်ပါဆိုတာ။ ခုတော့။ :(
Sayonara and all the best to you
ကြုံရင်တော့ ပြန်ပြန် ဝင်လာခဲ့ပါအုံး။ ဘလော့ဂ်မှာတော့ ဒီလို နှုတ်ဆက်တိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပဲ။ ကိုယ့်အလှည့်လည်း ဘယ်တော့မှန်း မသိသေးဘူး။